Riek Machar oo laga saaray isbitaal lagu daweynayay magaalada Khartoum – STAR FM SOMALIA
Hogaamiyaha mucaaradka Koofurta Sudan Riek Machar ayaa ka baxay isbitaal lagu daweynayay magaalada Khartoum caasimada dalka Sudan hase yeeshee waxaa la sheegay inuu sii joogi doono magaalada Khartoum.
Wasiirka warfaafinta Sudan ayaa sheegay August 23 in Machar oo ka soo cararay dagaalo u dhexeeya ciidamadiisa iyo kuwa dowlada uu u yimid Khartoum sababo cafimaad awgeed.
Mid kamid ah kaaliyaasha wehelinaya Machar Sabt Makkouk ayaa sheegay in xaalada caafimaad ee Machar ay wanaagsan tahay balse uu sii joogi doono Khartoum.
Madaxweynaha Koofurta Sudan Silva Kiir ayaa shaqada ka eryey madaxweyne ku xigeenkiisii hore kadib markii uu dib ugaga soo cusboonaaday dagaalo magaalada Juba bishii la soo dhaafay.
Machar ayaa ka soo baxay keynta kadib markii uu ka soo baxsaday dagaalada Juba, waxaana soo gelbiyay ciidamo ka tirsan Qaramada Midoobay ee ku sugan dalka Congo isagoo dhaawac ka qaba lug.
Makkouk ayaa sheegay in dhowaan uu shir jaraa’id qaban doono hogaamiyaha mucaaradka Koofurta Sudan kaasoo uu ku sharixi doono waxyaabihii ugu dambeeyay ee dalka Koofurta Sudan uuna lakulmi doono madaxweynaha dalka Sudan Omar Al-Bashir.
Madaxweynihii Brazil Dilma Rousef oo xil ka qaadis lagu sameeyay